China is in favor of stopping the US operation of Tiktoak instead of selling it! Tech News Nepal
शनिबार, भाद्र २७, २०७७ २१:३९
बिक्री गर्नुभन्दा बरु टिकटकको अमेरिकी सञ्चालन नै बन्द गर्ने पक्षमा चीन !
काठमाडौं । चीनले टिकटक बिक्री गर्नुको साटो अमेरिकी सञ्चालन नै बन्द गर्ने संकेत दिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले टिकटक बिक्रीका लागि दिएको अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा चीन सरकार त्यसको विपक्षमा देखिएको हो ।
विगत लामो समयदेखि अमेरिका र चीनबीच विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा को महाशक्ती बन्ने भन्ने होड चलिरहेको छ । टिकटकको डिललाई लिएर दुवै देश त्यसको एउटा संघारमा उभिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले टिकटक हस्तान्तरणका लागि मध्य सेप्टेम्बरसम्मको समयसीमा दिएको थियो । उक्त समयसीमा भित्र यो डिल सम्पन्न हुने वा नहुने भन्ने विषय अझैं स्पष्ट भइसकेको छैन ।
टिकटकलाई विवादमा मुछ्नेमा अमेरिका एक्लो देश भने होइन । दुई देशबीचको सीमा विवादबीच भारतले टिकटक सहितका दर्जनौं चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
टिकटकको डिलको दबाबले चीनको नियमनकारी व्यवस्थामामा समेत परिवर्तनहरु देखिन थालेका छन् । हालै मात्र चीनले आफ्नो निर्यातसम्बन्धी नीतिमा बदलाव ल्याएको छ । जसले टिकटकको कारोबारलाई सीमित गर्ने र सम्भवतः बिक्रीलाई नै रोक्नसक्ने बताइएको छ ।
टिकटकको माउ कम्पनी बाइटड्यान्स यतिखेर पेलानमा परेको छ । ट्रम्पले उसलाई शक्ति अभ्यासको गोटीको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यदि यो डिलमा दुवै देश एक ठाउँमा उभिए भने निश्चित रुपमा त्यो पनि आश्चर्यकै विषय हुनेछ ।